Duqeyn ka dhacday Yemen | allsaaxo online
Duqeyn ka dhacday Yemen
Published on August 3, 2018 by said · No Comments
Isbitaalada magaalada Hodeida ayaa waxa ay codsanayaan deeq dhiig oo deg-deg ah, Hay’adda caalamiga ah ee Bisha Cas ayaa sheegtay in ay isbtilaalada u direeyso qalabka qalniinka si loo daweeyo 50 qof oo dhaawac culus ka soo gaartay duqeynta.
Dadka la laayay amaba la dhawacay ayaa waxaa u badnaa kaluumeeysatada deegaanka oo ku sugnaa suuqa kaluunka.
Inta badan dhawaaca ayaa waxaa la geeyay isbitaalka Al Thawra waxaana banaanka isbitaalka yaalay laba gaari oo ambalaas ah, oo ay waxyeello soo gaaratay waxa ayna taasi muujineysaa sida uu xitaa isbitalka ugu sigtay in ay dhibaato ka soo gaarto duqeynta.
Suuqa kaluunka ayaa aad ugu dhaw afka hore ee badda Hodeida. Intii uu socday dagaalka yemen Dekadda ayaa noqotay furin dagaal.
Lix toddobaad ka hor, xuladafda uu sacuudiga hoaamiyo ayaa dagaal culus ku qaaday dagaalyanada xutiyiinta eek u sugan magaalada Hodeida si ay gabi ahaanba uga nadiifiyaan magaalada.
Hay’adaha deeqbiyeyaasha ayaa ka digay in khash-khaad kasta oo ka dhaca magaalada dekedda ah ee Hodeida uu nolosha malaayin qof oo reer yemen ah cariiri galinayo.
Saddex sano iyo dheeraad ayuu dalka Yemen la daalaa dhacay dagaal sokooeye, kaas oo ay ugu yaraan ku dhinteen 10,000 oo qof, boqolkiiba 75 dakaasina waxa ay ahaayeen rayid. Waxaa sidoo kale dagaalka ku barakacay malaayin qof oo macluul qarka u saaran sida ay sheegtay Qaramada Midoobay.
Daglaaka ayaa bilowday sanadkii 2014-kii markii mucaaradka xutiyiinta ay ka faa’iidaysteen daciifnimada madaxweyne Abdrabbuh Mansour Hadi, Waxa ayna la wareegeen maamulka gobolka saada iyo deegaanada ku deedsan, kadibna waxa ay ku siqeen oo weerareen magaalada sanca, kaasi oo Mr Hadi ku qasbay in uu wadanka ka baxo.
Dagaalka ayaa cirka isku sii shareeray bishii Maarso ee sanadkii 2015-kii, markii Sacuudi Carabiya iyo sideed wadan oo kale oo u badan wadamada Carabta ee Suniyiinta ah oo taageera ka helaya Mareykanka, UK iyo faransiiska ay xutiyiinta ku bilaabeen weerarada dhanka cirka ah, oo looga gol lahaa in dib loo soo nooleysiiyo dowladda Mr Haddi.
Mar uu bishii hore Mr Haddi wareysi siiyay BBC-da ayuu sheegay in faragalinta milatari ee xulafada Sacuudiga uu hogaamiyo ay qaadatay muddo kabadan waqtigii la filayay balse waxa uu yiri hadii aysan iyaga ahayn xaaladdu sidaan waa ay ka sii xumaan lahayd.